Xildhibaanno sheegay iney Galmudug uga yimideen Ololaha Is-Xil-Qaan – Kalfadhi
Xildhibaanno ka tirsan Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa maanta ka qeyb-qaatay ololaha uu alifkeeda leeyahay Madaxweyne Farmaajo ee “Is-Xil-Qaan” ee lagu hagaajinayo Golaha Murtida iyo Madadaalada. Waxay sheegeen iney aad ugu faraxsan yihiin in ay noqonayaan masuliyiin xil ummadeed haya, oo ka socda Dowlad Goboleed, kuwii ugu horeeyey ee ka qeyb qaata ololaha lagu doonayo in dib loogu soo celiyo bilicdii iyo shaqaddii Tiyaatarka Qaranka.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay iney tahay markii ugu horeysay oo uu Maamul Goboleed kasoo qeybgalo Barnaamijkan Is-Xil-Qaan ee ay Madaxda Qaranku ku baaqday” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq Sh. Maxamed Faarax, oo isagoo ku jira shaqada uu ka hayey Tiyaatarka Qaranka la hadlay Suxufiyiin ku booqatay goobta. “Mar labaad, mar saddexaad iyo afaraadba waan imam doonaa” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Cabdirisaaq Sh. Maxamed Faarax oo ah Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Galmudug
Xildhibaan Cabdi Nuur Geelle ayaa, isaguna, sheegay in, marka laga soo tago shaqada Tiyaatarka Qaranka ka socota ee ay maanta ka qeyb-qaateen, ay tahay in Madaxda iyo Masuuliyiinta Dowlad Goboleedyadu ay deegaanadooda ka bilaabaan Barnaamijka Is-Xil-Qaan, “iyadoo tan ka socota caasimaddana laga qeyb-qaadan karo” buu yiri Xildhibaan Geelle. “Waxaan leeyahay Maamulka Galmudug waan idiin bilownayee, dhameystirta” ayuu Geelle hadalkiisa kusoo xiray.
Sidaas oo kale ayuu Xildhibaan Cabdirisaaq ugu baaqay iney Dowlad Goboleedyadu ku daydaan iyaga, oo ay kusoo biiraan shaqada ay maanta ka qabteen Tiyaatarka Qaranka. “Waxaan ugu baaqeynaa Maamul Goboleedyada kale in ay nagu daydaan, kana soo qeyb-galaan shaqada qaranka” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq. Waxa uu sheegay in aad waddankaaga jeceshay in ay tahay immaan, sida uu hadalka u dhigay, “taas oo ay haboon tahay” buu yiri “in si ficil ah loo muujiyo”.
Cabdi Nuur Geelle oo ah Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Galmudug